Ny anjara asan'ny fiovaovan'ny toetr'andro izao amin'ny fitomboan'ny tahan'ny allergy
Misy fiantraikany amin’ny olona an-tapitrisany eran-tany ny fiovaovan’ny toetr’andro, miseho amin’ny fiakaran’ny mari-pana, ny loto mandringa, ny tondra-drano manimba, ary ny hain-tany mahery vaika. Ny fiakaran'ny tahan'ny allergie amin'ny taovam-pisefoana mifandray amin'ny loto toy ny asthma, rhinitis, ary tazo mololo nandritra ireo taona faramparany dia mety ho vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Na izany aza, raha nodinihina ny fiantraikan'ny fiakaran'ny maripana sy ny fahalotoan'ny rivotra amin'ireo aretina mahazaka ireo, dia mbola tsy nisy ny topimaso feno momba ny fiantraikan'ireo anton-javatra ireo hatramin'izao.
Tao amin'ny famerenana navoaka tao amin'ny Chinese Medical Journal tamin'ny 5 Jolay 2020, ny mpikaroka dia namintina ny fahasarotan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fahalotoan'ny rivotra ary ny allergen entin'ny rivotra toy ny vovobony sy ny spores miaraka amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana. Resahin'izy ireo ny mety ho fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, anisan'izany ny hafanana tafahoatra, mivantana amin'ny taovam-pisefoana sy miteraka aretina mahazaka. Fanampin'izany, asongadin'izy ireo ihany koa ny andraikitry ny loza voajanahary toy ny oram-baratra, ny tondra-drano, ny doro tanety ary ny tafio-drivotra amin'ny fampitomboana ny famokarana sy ny fanaparitahana ny allergen entin'ny rivotra ary ny fampihenana ny kalitaon'ny rivotra, izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny famintinana ny lahatsoratra dia aseho amin'ny lahatsary ao amin'ny YouTube.
Amin'ny ankapobeny, ny famerenana dia mampitandrina amin'ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana amin'ny ho avy noho ny fiantraikan'ny hafanana sy ny allergen entin'ny rivotra amin'ny fahalotoan'ny rivotra. "Ny vinavinay dia mampiseho fa hitombo ny haavon'ny kojakoja sy ny ozone eny amin'ny rivotra miaraka amin'ny hafanan'ny toetr'andro, ary ny fiakaran'ny mari-pana sy ny haavon'ny CO2 dia mety hampiakatra ny haavon'ny allergen entin'ny rivotra, hampitombo ny mety hisian'ny aretin'ny taovam-pisefoana mahazaka," hoy ny Prof. .Cun-Rui Huang, izay nitarika ilay fianarana.
Miara-miasa ity tatitra ity ho antso ho amin'ny asa fikarohana, fampandrosoana ary ezaka fanentanana avy amin'ireo matihanina amin'ny fitsaboana, mametraka ny fototra ho an'ny paikady momba ny fahasalamam-bahoaka mahomby kokoa. "Ny fepetra tsotra amin'ny fandrindrana an-tanàn-dehibe toy ny famoronana faritra ambany fandotoana rivotra manodidina ny trano fonenana, ny fambolen-javamaniry tsy mahazaka, ary ny fanetezana fefy alohan'ny voninkazo dia mety hampihena ny fihanaky ny poizina ary hampihena ny loza ateraky ny fahasalamana. Ny fanaraha-maso ny toetr'andro sy ny rafitra fampitandremana dia afaka manampy ihany koa ny manam-pahefana hiaro ny vahoaka marefo toy ny mponina an-tanàn-dehibe sy ny ankizy amin'ny aretina toy izany, "hoy ny fanazavan'ny Prof. Huang, ary nampiany fa ny fomba fiasa toy izany dia ho zava-dehibe amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny aretin'ny taovam-pisefoana amin'ny ho avy.
Ilaina tokoa ny fiaraha-miasa amin’ny fitandroana ny zon’ny tsirairay hifoka rivotra madio.
Previous Fomba vaovao hisorohana ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana
Manaraka Mandray anjara amin'ny fametraham-pialana lehibe izao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafizin'ny Brits